यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ - अभ्यासमा राख्नको लागि उत्तम सुझावहरू के हुन्? | बेजिया
सुसाना Godoy | 14/01/2022 12:00 | यात्रा
यात्रामा जानुहोस्, नयाँ ठाउँहरू पत्ता लगाउनुहोस् र जडान विच्छेद गर्नुहोस् ती तीनवटा चीजहरू हुन् जुन हामी प्रायः मनपर्छौं र त्यो हात मिलाएर जान्छन्। थप रूपमा, यो भन्नुपर्दछ कि तिनीहरू पनि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि साँच्चै आवश्यक छन्। त्यसोभए यदि तपाइँ यात्रा गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, सबै चीजहरू पहिले नै योजना बनाउनु उत्तम हुन्छ ताकि तपाइँ कुनै पनि कुरालाई नछुटाउनुहोस्।
त्यो बाहेक, हामी तपाईंलाई साथ छोड्छौं उत्तम सुझावहरू ताकि तपाईं तिनीहरूलाई अभ्यासमा राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै उपयोगी सल्लाह जुन हामीलाई थाहा छ तर धेरै ढिलो नभएसम्म हामी सधैं ध्यान दिदैनौं। त्यसोभए, हामीले तपाईंको लागि सूची बनाएका छौं। यसलाई शान्तपूर्वक पढ्न र राम्रोसँग लेख्न मात्र बाँकी छ। शुभ बिदा!
1 सबै पैसा एकै ठाउँमा नराख्नुहोस्
2 नजिकका ठाउँहरू जान्ने शर्त
3 तपाईं जानु अघि केहि अनुसन्धान गर्नुहोस्
4 यदि तपाईं बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, लचिलो हुनुहोस्
5 यात्रामा जानको लागि धेरै लुगाहरू नलगाउनुहोस्
सबै पैसा एकै ठाउँमा नराख्नुहोस्
हामीले यात्रामा जानको लागि कुन यातायातको साधन प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुराले फरक पार्दैन। सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईले सबै पैसा एकै ठाउँमा बोक्नुहुन्न। तपाईले केहि आफ्नो खल्तीमा र केहि तपाईको पर्समा बोक्न सक्नुहुन्छ। केवल यस तरिकाले हामी यो सुनिश्चित गर्नेछौं कि, केहि अप्रत्याशित घटनामा, हामीले सबै कुरा गुमाउनु पर्दैन। यो सत्य हो कि ढिलो पैसा हामीले केहि बोक्नुपर्छ तर धेरै होइन। यो सधैं एउटा कार्ड राख्न सिफारिस गरिन्छ जसमा तपाईंसँग धेरै पैसा नहुन सक्छ तर यात्राको लागि पर्याप्त छ र जहाँ तपाईंसँग सामान्य खर्च वा तपाईंको बाँकी बिलहरू छैनन्। निस्सन्देह, यो सधैं एक भन्दा बढी हुन सम्भव छैन र यो आवश्यक पनि छैन।
नजिकका ठाउँहरू जान्ने शर्त
यो सत्य हो कि यदि तिनीहरूले हामीलाई हाम्रो सपनाको यात्रा के हो वा त्यो गन्तव्यमा हामी जान चाहन्छौं भनेर सोध्छन् भने, तिनीहरूले सामान्य नियमको रूपमा टाढाको नामको सपना देख्नेछन्। खैर, यो धेरै अवसरहरूमा भन्नै पर्छ यदि हामी बस्ने ठाउँको नजिक रह्यौं भने हामीले ठूलो आश्चर्यहरू पाउनेछौं। किनभने हामी पनि समुदाय र शहरहरू अन्वेषण गर्न घेरिएका छौं। थप रूपमा, निश्चित रूपमा हामीले उत्कृष्ट प्रस्तावहरू पनि फेला पार्नेछौं किनकि तिनीहरू विशेष गरी पर्यटक क्षेत्रहरू होइनन्।
तपाईं जानु अघि केहि अनुसन्धान गर्नुहोस्
यदि अन्तमा तपाई यस टाढाको ठाउँबाट टाढा जानुभयो भने, यो यसको बारेमा थोरै अनुसन्धान गर्न लायक छ। अब हामीसँग हाम्रो औंलाको छेउमा र एक क्लिकमा प्रविधि छ हामी सबै चलनहरू, यसको ग्यास्ट्रोनोमी र सबैभन्दा भ्रमण गरिएका ठाउँहरू जान्न सक्छौं। त्यसोभए, तपाईले के भ्रमण गर्ने सन्दर्भमा केहि योजना बनाएको छ भनेर चोट लाग्दैन। हो, यो सत्य हो कि एक पटक त्यहाँ यी योजनाहरू पलको आधारमा परिवर्तन हुन सक्छ, तर कम्तिमा, हामीले मनमा हेर्नै पर्ने निश्चित ठाउँहरू राख्न सक्छौं।
यदि तपाईं बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, लचिलो हुनुहोस्
यात्रा गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण बिन्दु भनेको खर्चमा बचत गर्न चाहनु हो। ठिक छ, यदि तपाइँ केवल यात्रामा धेरै पैसा खर्च गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ दिन वा घण्टाको सन्दर्भमा सामान्य रूपमा लचिलो हुनुपर्छ। किनभने यदि तपाइँ एक विशेष दिन खोज्नुहुन्छ र हामी सप्ताहन्तमा जान्छौं भने, मूल्यहरू गगनचुम्बी हुनेछन्। केहि गन्तव्यहरूमा पनि यस्तै हुन्छ, त्यसैले हामीले तपाईंलाई पहिले नै नजिकका ठाउँहरू वा हामीले मनमा राखेका ठाउँहरूमा बाजी लगाउन सल्लाह दिएका छौं।
यात्रामा जानको लागि धेरै लुगाहरू नलगाउनुहोस्
सबैभन्दा डरलाग्दो क्षणहरू मध्ये एक प्याक गर्ने समय हो। किनभने यस्तो देखिन्छ कि हामीलाई सबै चीज र अधिक चाहिन्छ, तर हामी आधा भन्दा कम प्रयोग गर्छौं। तर, मौसमको आधारमा हामी आधारभूत लुगाहरू र दिनको लागि धेरै आरामदायक जुत्ताहरू लगाउनेछौं र हामीलाई आज रातको लागि चाहिन्छ। आधारभूत विचारहरूमा शर्त लगाउनु उत्तम हुन्छ जसले पछि शैली परिवर्तन गर्न सक्छ र सामानहरू थपेर हामीलाई दोस्रो रूप दिन्छ। कालो पोशाक, वा जीन्स र सेतो ब्लाउजको साथ, उदाहरणका लागि। यदि तपाईं यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईलाई रमाइलो गर्न बाँकी छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » यात्रा » यात्रामा जानका लागि उत्तम सुझावहरू
स्वस्थ बानीहरू जसले तपाईंलाई राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ